Abaalmarinta Caddaaladda - Argagixisnimo Loo Raadinayo - Yasin al-Suri
Ezedin Abdel Aziz Khalil, oo sida caamka ah loo yaqaano Yasin al-Suri, waa qof mudo dheer ah ahaa fududeeyahay al-Qaida oo uu Iiraan fadhigiisu yahay. Yasin al-Suri mas’uuliyiinta Iiraan ayaa waxay qabatay bisha Disember 2011 ka dib marka lagu dhawaaqay abaal-marin gaaraysa ilaa iyo $10 milyan oo ay Abaal-marinta Caddaalada (Rewards for Justice) ku dhawaaqday, balse hoggaankiisa wuxuu sii waday shabakadda Iiraan saldhigeedu yahay ee AQ.
Maadaama uu yahay madaxa daadiyaha al-Qaida Iiraan, Yasin al-Suri wuxuu mas’uul ka yahay la socoshada dadaaladda al-Qaida in ay soo gudbiyaan kuwa qibradda u leh iyo hogaamiyeyaal ka soo wadaan Baakistaan ayna Suuriya usoo gudbiyaan, iyagoo abaabulaya oona la socda dariiqyada ay ku safri karaan kuwa cusub ee la howlgeliyay oo ay Suuriya ku tagayaan iyagoo Turkey la soo marinayo, oona laga caawinayo dhaqdhaqaaqa al-Qaida ka wada Galbeedka.
Al-Suri lacagta ayuu xawilaa oo si baahsan shaqaale uga qoraa Barriga Dhexe ilaa iyo Iran, oo ka dibna ilaa iyo Baakistaan, si loo taageero hogaamiyeyaasha sare ee al-Qaida. Madaxda Iraniyiinta xiriirka ay la leeyihiin al-Suri way sii wadaan oo waxay u fasaxeen inuu ka howlgalo guddaha Iran tan iyo 2005.
Al-Suri wuxuu fududeynayay dhaqdhaqaaqa shaqaale u qorista al-Qaida ka soo bilow Khaliijka ilaa iyo Baakistaan iyo Afghanistan iyadoo Iran loo marayo. Sidoo kale waa deeq-u-ruriye muhii u ah al-Qaida oo wuxuu lacag ka soo ururiyay deeq-bixeyayaal iyo deeq-u-ruriyeyaal Khaliijka ku kala baahsan. Al-Suri deeqo xaddi badan ayuu wuxuu soo marsisaa Iran isagoo uu usoo gudbinayo hoggaanka al-Qaida ee Afghanistan iyo Iraq.
Isagoo la shaqeynaya dowladda Iraaniyiinta, al-Suri wuxuu qaban-qaabiyay deysmadii dadkii al-Qaida oo ku jira jeelalkii Iran. Goorta la soo daayo howl-wadeenada al-Qaida, dowladda Iraaniyiinta al-Suri ayay usoo gudbisaa, kaasoo ka dibna fududeeya safarkoodii ay ku tagi la’haaeen Baakistaan.
Goobta Dhalashada: al-Qamishli, Syria
Magacyada La Sheegto: al-Suri, Yaseen al-Suri, Izz al-Din Abd al-Farid Khalil, Zayn al-Abadin